Nhau - Chimiro uye basa nezve oiri rudzi transformer
Chimiro uye basa nezve oiri rudzi transformer
Kugadzirisa basa rekugadzirisa Muchitsiko chikuru chemagetsi emagetsi emagetsi emuguta, shanduko huru inowanzoshandisa matatu-phase-immersed transformer, sezvinoratidzwa mumufananidzo.
Oiri-akanyudzwa matransformer anonyanya kuumbwa nesimbi cores, windings, matangi emafuta, voltage regulators, radiators, mapiro emafuta, gasi relay, insulating maoko, machubhu-anoputika uye zvimwe zvikamu.
Iron core Three-phase oiri-immersed transformer outline diagram Iyo iron core inoumbwa nelaminated silicon simbi mapepa ane yakanaka magineti permeability. Inoumba yakavharwa magnetic flux circuit. Iyo yekutanga uye yechipiri windings ye transformer yakakuvadzwa pane iron core.Transformer cores yakakamurwa kuva marudzi maviri: core type uye shell type.Parizvino, mashanduri anoshandiswa zvakanyanya ndeemhando yepamusoro. Muti wesimbi wakaita semwoyo une mbiru yesimbi yekumaodzanyemba nejoko resimbi. Iyo simbi yesimbi yeoiri-yakanyudzwa transformer ine nzira yemafuta yekutonhodza iyo musimboti wesimbi, iyo inofambisa kutenderera kwemafuta etransformer uye zvakare inosimudzira kupisa kupisa kwemidziyo.
Winding Winding, inozivikanwawo se coil, ndiyo conductive loop ye transformer. Yakagadzirwa nemhangura kana aluminium waya kuti iite multilayer cylinder.
1. Yechipiri mhepo inomonereka yakanyungudutswa yakasungwa pane iyo iron core column.
2. Kuvhara, iyo yakaderera-voltage mhepo inowanzova mukati uye yakakwira-voltage mhepo iri kunze. Iyo insulating material inoputirwa netambo kuti ive nechokwadi chekuvharira pakati pewaya newaya pasi.
3. Tangi yemafuta Tangi yemafuta igoko remafuta akanyudzwa transformer. Mukuwedzera kune mafuta, inoshandiswawo kuisa zvimwe zvikamu.
4. Voltage regulating device Iro voltage regulating device inogadzirirwa kuti ive nechokwadi chekugadzikana kwechipiri chechipiri che transformer. Kana magetsi emagetsi achinja, shandisa voltage regulator kugadzirisa shanduko yepombi yetransformer kuti uve nechokwadi chekugadzikana kweyechipiri divi rekubuda voltage. Iyo yekumanikidza inodzora mudziyo yakakamurwa kuita mhando mbiri: pane-mutoro dhizaini inodzora mudziyo uye isina-mutoro dhizaini inodzora mudziyo.
5. Radiator Radiator yakaiswa pamadziro etangi remafuta, uye kumusoro nepasi zvikamu zvakabatana netangi remafuta kuburikidza nemapaipi. Kana paine mutsauko wekushisa pakati pekupisa kwemafuta epamusoro uye tembiricha yakaderera yemafuta eshanduko, iyo convection yemafuta inoumbwa kuburikidza neradiator, yozoyerera ichidzokera kutangi remafuta mushure mekutonhodzwa neradiator. Basa rekushisa kwemafuta e transformer. Kuti uvandudze maitiro ekutonhora, matanho akadai sekuzvitonhodza, kumanikidzirwa kutonhora kwemhepo uye kumanikidzirwa kwemvura kutonhora kunogona kugamuchirwa.
6. Oil pillow Oil pillow inonziwo oil tank. Transformer oiri ichawedzera uye chibvumirano nekuda kwekushanduka kwekushisa, uye huwandu hwemafuta hunokwirawo kana kudonha nekushanduka kwekushisa. Basa remupiro wemafuta nderokusiya nzvimbo yekuwedzera kwekushisa uye kuputika kwemafuta kuchengetedza tangi yemafuta nguva dzose yakazara nemafuta; panguva imwecheteyo, nekuda kwepillow yemafuta, nzvimbo yekubatana pakati pemafuta nemhepo inoderedzwa, iyo inogona kuderedza kusvibiswa kwemafuta.
7. Gasi relay Gas relay, inozivikanwawo seBuchholz relay, ndiyo inonyanya kudzivirira chigadziro chezvikanganiso zvemukati zve transformer. Inoiswa pakati pepombi yemafuta inobatanidza tangi yemafuta uye piro yemafuta. Kana kukanganisa kwakakomba kukaitika mukati memushanduri, gasi relay rinoshandura pavhavha yedunhu kuti ifambe dunhu rimwechete; kana chikanganiso chisiri chakakomba chikaitika mukati memushanduri, gasi relay rinobatanidza kune chikanganiso chechiratidzo chedunhu.
8. Insulating bushings Yakakwirira uye yakaderera insulating bushings inowanikwa pachivharo chepamusoro che transformer tank. Oiri-akanyudzwa ma transformer anowanzo shandisa porcelain insulating bushings. Basa reiyo insulating sleeve ndeyekuchengeta yakakwira uye yakaderera voltage winding lead uye tangi yemafuta yakavharirwa zvakanaka, uye kugadzirisa zvinotungamira.
9. Kuputika-uchapupu chubhu Kuputika-uchapupu chubhu, inozivikanwawo sekuchengetedzwa kwemhepo duct, yakaiswa pane tangi yemafuta ye transformer, uye kubuda kwayo kwakavharwa negirazi rinoputika-risingabvumiri firimu. Kana kukanganisa kwakakomba kunoitika mukati memushanduri uye gasi relay ikakundikana, gasi riri mukati metangi yemafuta rinoputika nepakati pegirazi rinoputika-rinodzivirira membrane uye rinobudiswa kubva mumhepo yakachengeteka kudzivirira kuti transformer irege kuputika.
Nguva yekutumira: Zvita-31-2020